रामेछापमा बाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने १० आधार « Ramechhap News
रामेछाप जिल्लाले तीनलालको जिल्लाको रुपमा पहिचान बनाएको छ । रामेछाप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, राणा शासनको विरुद्ध परिवर्तनकारी आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका गंगालाल र साहित्यका माध्यमबाट राणा शासन थर्कमान बनाउने कृष्णलाल अधिकारी जन्मिएको जिल्ला हो । त्यसैले तीनलालको किल्ला भनेर रामेछापले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनिन्छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिबेला ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको छ । पुष्पलालले देखाउनुभएको बाटोमा आज बामपन्थी आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । उहाँको परिकल्पना गरेको उदेश्यले सार्थकता पाउने प्रारम्भिक चरणमा हामी छौं । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात एउटै पार्टी निर्माणको यस ऐतिहासिक चरणमा आइपुग्नु निकै सुखद पक्ष हो ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम तालमलेदेखि दुई ठूला पार्टीका साथै स–साना कम्युनिष्ट पार्टी समेतलाई एकीकरण गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा र जिम्मेवारी पूरा गर्न तत्परता देखाएकामा एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति जनभरोषा जागेको छ । चुनावी गठबन्धनदेखि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने ऐतिहासिक निर्णय गर्ने पहलकदमी र नेतृत्व गर्ने दवै पार्टीका श्रद्धय अध्यक्षहरुलाई रामेछापवासीको तर्फबाट सलाम !
उहाँहरुले लिनुभएको यो महत्वपूर्ण योगदानलाई भावी पुस्ताले समेत सकारात्मक मुल्याङ्कन गर्नेछ । वामपन्थी गठबन्ध र एकीकरण प्रक्रियाको प्रभाव रामेछापमा पनि राम्रैसँग परेको छ । अब रामेछापमा भएको एक प्रतिनिधिसभा र दुई वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा वामपन्थी गठबन्धनले जित्ने आधारको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
१.रामेछापेली जनता विकास, शान्ति र समृद्धि चाहन्छन । त्यसका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । २०४६ सालयता जनताको प्रगति र विकासको बाधक स्थायी सरकार बन्न नसक्नु नै हो । बाम गठबन्धनले स्थिर सरकार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै समाजको रुपान्तरण र गरिबीको अन्त्यसँगै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अठोटलाई यहाँका जनताको समर्थन छ ।
२. प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार श्यामकुमार श्रेष्ठ प्रदेशसभा ‘ख’का उम्मेवदार कैलाश ढुंगेल प्रदेशसभा ‘क’ का उम्मेदवार शान्तिप्रसाद पौडेल तीनै जना नै राजनीतिक रुपमा अनुभवी, विकासको खाका तयार गर्न सक्ने, रामेछापको समृद्धिको योजना तयार गर्न सक्ने योग्य र क्षमताले निपुन उम्मेदवारहरु हुन् ।
३. रामेछापको विकास निर्माण खासगरी सडकको गुरुयोजना बनाउन नेतृत्व गर्ने तत्कालिन जिविसका सभापति कैलाश ढुंगेल र योजना कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालिन जिविस सदस्य शान्तिप्रसाद पौडेल र रामेछापबाट सांसद हुँदा ‘उज्यालो रामेछाप’का लागि पहलकदमी लिनुहुने श्यामकुमार श्रेष्ठ उहाँहरुसँग सिंगो जिल्लाको मुहार फेर्न सक्ने दृढ संकल्प र इच्छा शक्ति छ ।
४.वामपन्थीहरु नेतृत्वमा हुँदा धेरै विकासका कामहरु रामेछाप जिल्लामा अघि सारिएका छन् । गठबन्धनका उम्मेदवारहरु जनताका घरदैलोमा पुगेका परिचित अनुहारहरु हुन । जिल्लाको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, वन जंगल, पर्यटन, विद्युत, उद्योग, रोजगारी युवा परिचालन, संचार सबै क्षेत्रको योजना बनाउन सक्ने समाथ्र्य तीनै जना उम्मेदवारहरुसँग छ ।
५. हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ । दलिय व्यवस्थामा व्यक्तिहरु दलमा आधारित हुन्छन । व्यक्तका केही पपुलर मत हन सक्लान । तर निर्वाचन दलहरुको दृष्टिकोण र विचारमा लडने हो । व्यक्तिलाई दलले निर्देशन गरेको हुन्छ । आज रामेछापमा व्यक्तिले गरेको केही नगन्य कामलाई लिएर तिललाई पहाड बनाउदै चर्चा गर्ने गरिएको छ । रामेछापको विकास एउटा डोजर र एम्बुलेन्सले मात्र हुँदैन । वाम गठबन्धन सिंगो जनताको समृद्धि चाहन्छ । यस्ता डोजर र एम्बुलेन्स स्थानीय सरकारले दिन सक्छ । हामी स्पष्ट जिल्लाको विकासको मार्गचित्र बनाउन चाहन्छौ । एउटा एम्बुलेन्स र डोजरले सिंगो जिल्लाको मुहार फेर्न सक्दैन । वाम गठबन्धनले रामेछापको समृद्धिको लागि स्पष्ट योजना र खाका अगाडि सारिसकेको छ ।
६. जिल्लामा बाम गठबन्धनलाई उत्तेजित बनाउन विपक्षीले अनेकन आरोप लगाएको पनि सुनिने गरेको छ । यो आरोप हारको उपज हो । हारको मानसिकताले विवेक गुमाउछ । कांग्रेसले अहिले जनतालाई भ्रम सृजना गर्न कम्युनिष्ट शासन आए रुन पनि पाइदैन भनेर बच्चाले नपत्याउने गफ छाटेर हिडने गरेको छ । यो पूरानो नाराको पछाडि जनता लाग्दैन । किनकी जनता अहिले ठिक र वेठिक छुटयाउने ठाउँमा आइपुगेका छन् । कांग्रेसले २०५१ सालको निर्वाचन अघिसम्म कम्युनिष्ट सरकार बने ६० बर्ष माथिलाई गोली हान्छन भन्ने भ्रमको खेती पनि गरेको हो । आफ्नो नीति र विचार नभएपछि कम्युनिष्टको राम्रो कार्यक्रमको राम्रोको विरोध गरेर भोट ल्याउने कांग्रेसको नीति उहिल्यै फेल भइसकेको हो । २०५१ सालमा मनोमहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले बृद्धबृद्धा, अपाङग, एकल महिलाहरुलाई एल्टै सामाजिक सुरक्षा भक्ताको व्यवस्था गरेको दृष्टान्त छ । त्यसैले यस पटक रामेछापवासी जनताले बाम गठबन्धनलाई ढुक्क भएर मतदान गर्छन । कांग्रेसको भ्रमको पछाडि लाग्दैनन् ।
७. स्थानीय सरकार मूलतः वामपन्थीहको कब्जामा छ । रामेछाप जिल्लामा रहेको आठ वटा स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले पाँच वटा र माओवादी केन्द्रले २ वटा र नपाली कांग्रेसले एक स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको छ । प्रमुख उपप्रमुख सहित बहुमत सदस्य संख्या बामपन्थीहरुको छन् । ती जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार छन् । जसरी भर्खरैको स्थानीय निर्वाचनमा अहोरात्र क्रियाशिल भए । अहिल पनि भइरहेका छन् । फेरि वैशाख ३१ म प्राप्त बाम गठन्धनको मत ५६ हजार ६ सय ६४ र नेपाली कांग्रेसको २७ हजार ३५४ मत तुलना गर्दा २९ हजार ३१० मतको फरक देखिन्छ । वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको मतलाई मात्र संरक्षण गरे पुग्छ । यो भूमिका पार्टी पत्ति त छदैछ । जनप्रतिनिधहरुले पनि निभाउने छन् ।
८.रामेछाप जिल्ला वापन्थीहरुको उर्वर भूमि हो । पञ्चायकालदेखि नै बामपन्थी चेतना बोकेका धेरै अग्रजहरुको योगदानले न रामेछापको कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास भएको छ । त्यसकारण वामपन्थी चेतना बोकेका बहुसंख्यक जनता कसैको लोभ र प्रलोभनमा फस्दैनन् ।
९. जहासम्म वापन्थी गठबन्धनभित्र समस्या छ भन्ने गलत रण् मनोगत भ्रम फैलाउने चेष्टा गरेर मत आर्कषित गछौ भन्ने विपक्ष कांग्रसको सोचाई होला । त्यो भ्रम मात्र हो । कम्युनिष्ट पार्टीमा निर्णय नहुन्जेल धेरै छलफल र वादविवाद हुन सक्छ । तर निर्णयपछि एकरुपतामा लागू हुने गर्छ । हाम्रो पद्दती त्यही हो । हिजो केही समस्या थिए । तर ती समस्या समाधान भएर सबै एकताबद्ध भएर वाम गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउने लागि सकेका छन् । अहिले चुनावी तालमेल मात्र होइन । भोली पार्टी एकताको महान अभियान पनि बाम गठबन्धनले बोकेको छ । अहिलेको प्रक्रियालाई असहयोग गरेर बाम गठबन्धनका कुनै पनि नेता र कार्यकर्ताहरुले त्यो भूल गदैनन । हाम्रो चिन्ता अरु कसैले गर्नु जरुरी छैन् । सबै ढुक्क भए हुन्छ । वाम गठबन्धन भित्रको दुवै पार्टीको मत बराबरी हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुवै पार्टीका उम्मेदवाहरुलाई मत बराबरी आउने छ । तलमाथि हुने छैन् । किनकी प्राविधिक कारणले मात्र हो । निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता हुँदैछ ।
१०. बाम गठबन्धनले समानुपातिकतर्फ पनि आशा र भविष्य बोकेका युवाहरुलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा एमालेले रामेछापको प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट चुडादेवी घिसिङ लामा, प्रदेशसभाबाट नेकपा एमाले रामेछापका सचिव आनन्द श्रेष्ठलाई समानुपातिक बन्द सूचिमा समावेश गरेको छ । दुवै जना आगामी निर्वाचनबाट प्रतिनिसिभा र प्रदेशसभाका सदस्य हुने निश्चित रहेको छ । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै तर्फ समानुपातिकको सूचीमा नाम समावेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको लागि माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक मैनकुमार मोक्तान र प्रदेशसभाको लागि पूर्व सभासद लक्ष्मी गुरुङ रामेछापबाट समानुपातिकको वन्द सूचिमा परेका छन् । वाम गठन्धनको तर्फबाट चार जना समानुापतिक उम्मेदवार भएपनि रामेछापमा कांग्रेसबाट समानुपातिकमा कोही पनि परेका छैनन् । बाम गठबन्धनबाट चार जना समानुपातिकको सूचीमा पर्नुले पनि रामेछापवासीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
अहिले हामी निकट आइरहेको चुनावी अभियानमा छौ । खासगरी रामेछापमा बामपन्थी गठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जित्ने आधार संक्षेपमा प्रष्ट पार्न मात्र खोजेका हो । धेरै छलफल गर्दै गरौला । वाापन्थी गठबन्धनको केन्द्रीय घोषणापत्रले विपक्षीहरुको जस्तो अरोप–प्रत्यारोप गरिरहको छैन । जिल्लाका आफ्ना प्रतिबद्धता लिएर मतदाता समक्ष पुगिरहेका छौ । आजका २१ औ शताब्दीमा रामेछापेली मतदताहरुले उज्वल भविष्यका लागि समाजवादी बाटो रोज्ने छन् र मंसिर १० गतेपछि रामेछाप जिल्ला वाम गठबन्धनको लालकिल्ला बन्ने छ । यही विश्वासका साथ एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जुटौ ।
(लेखक एमाले रामेछापका प्रचार विभाग प्रमुख एवं बाम गठबन्धन मुल निर्वाचन कमिटीका सदस्य हुन् ।)